Cerro del Hierro, Seville ပြည်နယ်မှသဘာဝအလှတစ်ခု | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ဆွေမျိုး
Cerro del Hierro သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်သဘာဝအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည် ဆီဗီလာ နီးပါးခုနစ်ရာရာမီတာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်။ ရောမခေတ်ကတည်းကသတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် Sierra Norte သဘာဝပန်းခြံ.
၎င်း၏နာမကိုအမှီအကြံပြုထားတဲ့အတိုင်း, ကအတွက်စည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့သည် hierro ၎င်း၏ထုံးကြောကျကျောက်၏။ ယခုမူကား၎င်း၏အရေးပါမှုသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ကိုဖွဲ့စည်းသောအံ့မခန်းရှုခင်းတွင်တည်ရှိသည် karst။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝတန်ဖိုးနှင့်ပြီးပြည့်စုံခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်သည် တောင်တက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်ခြင်း။ Cerro del Hierro ကိုသင်ပိုမိုသိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
1 Cerro del Hierro ၏ဖွဲ့စည်းမှု
2 Cerro del Hierro တွင်လုပ်ဆောင်ရန်
2.1 Sierra Norte de Sevilla ၏ greenway
2.2 Cerro del Hierro လမ်းကြောင်း
3 Cerro del Hierro ဝန်းကျင်ရှိလှပသောမြို့နှစ်မြို့
3.2 ဆိပ်ကမ်း၏စိန့်က Nicholas
4 Cerro del Hierro ဘယ်လိုရောက်ရမလဲ
Cerro del Hierro ၏ဖွဲ့စည်းမှု
Cerro del Hierro ၏ဇာစ်မြစ်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိရသည် cambrian ကာလဆိုလိုသည်မှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းငါးရာခန့်ကဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပင်လယ်ကြမ်းပြင်များမှထုံးကျောက်ကျောက်များအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းစေခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုမြေသည်ဖြစ်သည် ကျောက်စိမ်း ယင်း၏သံကြွယ်ဝမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအောက်ဆိုဒ်နှင့်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်သွေးပြန်ကြောများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ယင်းတို့အားလုံးသည် Cerro del Hierro သတ္တုတူးဖော်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောမများမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းတွင်စကော့တလန်ကုမ္ပဏီများသည်ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် မြို့ အရာနေဆဲစည်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်သင်ဆဲယနေ့သွားရောက်နိုင်သည်။ သံပြောင်းရွှေ့ရန်ဤဒေသကိုဆဗီးလ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောရထားလမ်းတစ်ခုပင်ရှိသည်။
ထို့အပြင်ထိုဒေသရှိဘဝကိုမလွယ်ကူသင့်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းကို "Sevillian Siberia" ဟုချေါ။ ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာဆောင်းရာသီတွင်အပူချိန်သည်သုညဒသမအောက်တွင်ရှိသည်။
Cerro del Hierro တွင်လုပ်ဆောင်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည့်အတိုင်းဤareaရိယာသည်သင့်တော်သည် တောင်တက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်ခြင်း။ နောက်တစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သစ်တောများနှင့်လှပသောလမ်းကြောင်းများစွာရှိပြီးလှပသောလမ်းများရှိသည်။ ခင်ဗျားတို့ထဲကနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ပြမယ်။
Sierra Norte de Sevilla ၏ greenway
အတိအကျ ရထားလမ်းပုံစံ ငါတို့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းယခုသင်သည်ခြေလျင်သို့မဟုတ်တောင်တက်စက်ဘီးဖြင့်ခရီးသွားနိုင်သောစိမ်းလန်းစိုပြေရေးလမ်းသို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ သတ္တုတူးဖော်ရေးမြို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင် အင်္ဂလိပ်အိမ်, သောသတ္တုတွင်းဟောင်း၏အင်ဂျင်နီယာများနှင့်မန်နေဂျာများအတွက်နေထိုင်ရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လောလောဆယ်ကနေအိမ် စကားပြန်စင်တာ အဆိုပါ Cerro del Hierro ပေါ်မှာ။
Cerro del Hierro လမ်းကြောင်း
၎င်းသည် ၂ ကီလိုမီတာသာရှိသောကြောင့်အလွန်ကြီးမားသောရိုးရိုးရှင်းရှင်းနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝအလှအပအတွက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်ပြီးကျောက်ဆောင်များထူးခြားမှုကဲ့သို့ပင် အဆိုပါ lapiaces နှင့်အပ်။ ဒါပေမယ့်လည်းသတ္တုတွင်းဟောင်း၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်ပြခန်းများသို့ ၀ င်ရောက်လာလို့ပါ။
Cerro del Hierro သည်တောင်တက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒီအားကစားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အရေးအပါဆုံးနေရာကတော့ Seville ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာပါ။ စုစုပေါင်းမှာအချို့ရှိပါတယ် နည်းလမ်းတစ်ရာနှစ်ဆယ် ဂန္ထဝင်တောင်တက်ခြင်းအချို့သာမကအခြားခေတ်မီပြီးရှုပ်ထွေးသောအခြားများလည်းပါ ၀ င်သည်။ သင်ဤအားကစားကိုနှစ်သက်လျှင် Cerro del Hierro ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။
သဘာ ၀ ကိုခံစားနိုင်သည့်အပြင်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သောသတ္တုတွင်းမြို့ဟောင်းသို့သွားရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ ၎င်းတွင်အိမ်အကြွင်းအကျန်များကိုတွေ့ရသည့်အပြင်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဂိုဒေါင်များ၊ အင်္ဂလီကန်ချာ့ချ် နှင့်အဟောင်း ဘူတာရုံ။ သင့်တွင်ဖော်ပြထားသည့်စကားပြန်စင်တာနှင့်သင့်ဘက်ထရီများကိုအားသွင်းနိုင်သည့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုလည်းရှိသည်။
Cerro del Hierro မြို့ရှိအင်္ဂလီကန်ချာ့ချ်
Cerro del Hierro ဝန်းကျင်ရှိလှပသောမြို့နှစ်မြို့
သို့သော်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်မျှသာဝေးသောနေရာနှင့်အနီးရှိလှပသောမြို့နှစ်မြို့ကိုသင်မသိလျှင်၎င်းသဘာဝအရအံ့ to ဖွယ်ရာသင့်ခရီးစဉ်သည်မပြည့်စုံပါ။ Seville ပြည်နယ်၏အလှဆုံး။ သူတို့ကိုမင်းတို့အကြောင်းပြောပြမယ်။
Cerro del Hierro နှင့်အလွန်နီးကပ်သောနေရာတွင်နေထိုင်ပြီးလူ ၆၀၀၀ မျှသာနေထိုင်သောဤအဖြူရောင်မြို့ငယ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် Sierra Morena။ ကြေငြာခဲ့သည် သမိုင်းဆိုင်ရာအနုပညာ Complex, Constantina မြို့သည်သင့်ကိုကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။
စတင်ရန်, သင်သည်သူတို့၏သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ရဲတိုက်။ ၎င်းကိုအာရပ်ခေတ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာရှေးဟောင်းအရံအရံများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးပေါ်ပြုပြင်မှုများသည် ၁၅ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့သော်လည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမကြာမီကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Constantina the သို့လည်းသွားသင့်သည် လူ့ဇာတိ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်း၁၄ ရာစုမှမူဒီဂျရာဘုရားကျောင်းသည် ၁၆ ရာစုမှမြင်တွေ့ရသောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောမျှော်စင်မျက်နှာစာဖြစ်သည်။ အလားတူပင်အကြံပြုလိုသည်မှာ Nuestro Padre Jesúsနှင့် La Concepciónနှင့် Santa Clara နှင့်Tardónတို့၏သီလရှင်ကျောင်းများ၏လည်ပတ်မှုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် Constantina ရဲ့အလှဆုံးအရာကတော့သူ့အတွက်ပါ သမိုင်းဝင်ခမောက်, မြို့တော်ခန်းမ၏ neoclassical အဆောက်အ ဦ နှင့်ဒေသတွင်းသို့မဟုတ်အညီအမျှ neoclassical စတိုင်အတွက်၎င်း၏အများအပြားလှသောအိမ်များနှင့်အတူ။ သူတို့ထဲကနမူနာကောင်းတစ်ခုက CFuente ၏အရေအတွက် asa နန်းတော်။ နောက်ဆုံး၌သင်သည်Moreríaရပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီး Clock Tower ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ထို့အပြင် Cerro del Hierro နှင့်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာအဝေးတွင်နေထိုင်သူခြောက်ရာခန့်ရှိသောဤမြို့သည်ယခင်မြို့ဟောင်းထက် ပို၍ သေးငယ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အထဲတွင်သင်လှပသောသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် San Sebastián၏ Mudejar ဘုရားကျောင်းသူသည်ဗတ္တိဇံကိုခံသောနေရာဖြစ်သည် San Diego မှ de Alcala.
ရုံအခြား၎င်း၏အထိမ်းအမှတ၏ San Diego မှ၏ရသေ့လည်း Mudejar ။ နှင့်အညီ, ဤအတူ ရောမတံတား ၁၆ ရာစုမှကျောက်စိမ်းတစ်ခုနှင့်မွတ်စလင်တာဝါ၏အကြွင်းအကျန်များကိုဂါလင်ဒွန်မြစ်ပေါ်တွင်တွေ့ရသည်။
သို့သော် San Nicolás del Puerto သည်သင်တို့အတွက်နောက်ထပ်အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုရှိနေသေးသည်။ အကြောင်းပါ Huesna ရေတံခွန်များကြည့်ဖို့အကြံပေးထားတဲ့သဘာဝအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ။ ၎င်းကိုသစ်တောနှင့်မြစ်ကမ်းဘေးအပင်များဝိုင်းရံထားသောရေတံခွန်များနှင့်ရေကန်ငယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Cerro del Hierro ဘယ်လိုရောက်ရမလဲ
သငျသညျဤအထင်ကြီးသဘာဝအာကာသမှရရန်ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Constantina မှတောင်ဘက်သို့သို့မဟုတ် San Nicolás del Puerto မှမြောက်သို့သွားနိုင်သည်။ ပထမကိစ္စတွင်သင်လမ်းကြောင်းကိုယူရမည် A-455 ပြီးတော့ SE-163။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် San Nicolásမှခရီးထွက်လျှင်လမ်းသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည် SE-163.
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ Cerro del Hierro ဒါဟာသင်တက်ပြီးတောင်တက်သွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအံ့သြဖွယ်သဘာဝအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းင်း၏ရှုခင်းများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ကျေနပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သောလှပသောမြို့ကြီးနှစ်ခုသို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်ပါ။ သင့်မှာအခွင့်အရေးရှိရင်လည်ပတ်ပါ၊ ဒါကိုသင်စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ခရီးသွားလုပ်ငန်း » Cerro del Hierro